Too'ata fi qubeeffannoo - LibreOffice Help
Galmicha ykn filnnoo ammee dogoggora qubeeffannoodhaaf mirkaneessa. LibreOffice too'ata qubeeffannoo keessatti irrantoo, jalaantoo, galfata kasaa fi miljaleewwan qabata.
Meeshaalee - Too'ataa qubeeffannaa fili
Too'ataa fi Qubeeffannoo
1 Galmee jechootaa keessaa miti.
2 Yaadawwan dhihaatan
3 Barruu afaanii
4 When in Writer: Of sirreessaa
7 Al tokko Tuffadhu
8 Mara Tuffadhuu
10 Mara Jijjiiri
Jecha qubee dogoggoraan barreffame bakka buusuuf jechoota yaada dhihaatee tarreessa. Jechicha fayyadamuu barbaadde fili, ittaansuudhaan Jijjiiri ykn Mara Jijjiirii cuqaasi.
When in Writer: Of sirreessaa
When in Writer: Waliin makiinsa ammee jecha sirrii hin taanee fi jecha bakka bu'iinsa gara gabatee bakka bu'insa Of sirreessatti ida'a.
Dhimoota mara jechoota hin beekamnee galmee hundaa keessaa dhiisuun too'ata qubeeffannoo waliin itti fufa.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=3.6/Common/Spelling_and_Grammar/om&oldid=354145"